Universal Car Dvd Player China Manufacturers & Suppliers & Factory
universal အန်းဒရွိုက်ကား DVD
10.1inch Deckless အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Porsche က Android ကား DVD
Universal Car Dvd Player - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Universal Car Dvd Player ထုတ်ကုန်များ)
6.2 လက်မ 1 din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player
6.2 လက်မ 1 din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player 1. ဒီ Multi-touch screen ကိုဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ 6.2 လက်မ 1 din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက် HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity...
6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player
6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player7ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2. 6.2 လက်မတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက်ကားတစ်စီး...
ငွေအတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ကိုထိပါ
ငွေအတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ကိုထိပါ Touch ကိုငွေအတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ:7ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2. Touch ကိုငွေအတစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player...
deckless များအတွက် universal ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား
deckless များအတွက် universal ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား deckless ပံ့ပိုးမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်အဘို့ဤမော်ဒယ်က Universal ကားတစ်စီးဒီဗီဒီ: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni...
7 လက်မ Player ကိုများအတွက် universal မော်တော်ကား DVD ကို
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 318 * 229 * 107MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
7 လက်မ Player ကိုများအတွက် universal မော်တော်ကား DVD ကို7လက်မ Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients...
Universal Player ကိုသည်မော်တော်ကားဗီဒီယို player
Universal Player ကိုသည်မော်တော်ကားဗီဒီယို player android ဖုန်းနှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် Universal Player ကိုများအတွက် 1.Car ဗီဒီယို player, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့, ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients...
အန်းဒရွိုက် 7.1 စနစ်က Universal ကားကို DVD Player ကို
အန်းဒရွိုက် 7.1 စနစ်က Universal ကားကို DVD Player ကို 1.Android 7.1 စနစ်က Universal ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး...
6,95 လက်မ Player ကိုများအတွက် universal ကားစတီရီယို
6,95 လက်မ Player ကိုများအတွက် universal မော်တော်ကား DVD 6,95 လက်မ Player ကိုများအတွက် 1. က Universal ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ,...
အန်းဒရွိုက်က Universal ကားကို DVD Player ကိုများအတွက် 7.1 စနစ်
အန်းဒရွိုက်က Universal ကားကို DVD Player ကိုများအတွက် 7.1 စနစ် အန်းဒရွိုက်က Universal ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince များအတွက် 1. 7.1 စနစ်, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ,...
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ရောင်းရန်2din ကားစတီရီယို
ထုပ်ပိုး: 3.6KGS / Set 400 * 255 * 210MM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ရောင်းရန်2din ကားစတီရီယို 1. အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Rockchip ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်သည် တုံ့ပြန်မှုအချိန်လျှော့ချ။ အက်ပလီကေးရှင်းတင်ပိုမြန်သည်။ ကြီးမားသောဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်း။ ၄ င်းတို့အားလုံးသည် 4GB RAM, octa-core & 32G drive ၏ကားစတီရီယိုတွင်ပါဝင်သည်။...
Android dual din 6.95 "universal car dvd player
Android dual din 6.95 "universal car dvd player System and Hardware
Android 9.0 2din 6.95 "universal ကား DVD player
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM၊ အသုံးချဆော့ဝဲလ်များအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမြန်နှုန်း။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; subwoofer audio output ကို Support...
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ပိုမိုချောမွေ့မြန်ဆန်သောအပြောင်းအလဲမြန်သည်။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in TDA7851 အသံချဲ့စက် IC; subwoofer audio output ကို Support...
Android 9.0 2din 6.2 "universal car dvd player
Android dsp 2din ကားသစ် DVD player ကို
Android 9.0 octa core ၁၀.၁ လက်မ2din universal universal dvd player သည် octa core 64gb rom ၁။ Android 9.02din universal car dvd player - - ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်လည်းသူတို့၏ဓာတ်ပုံများကိုနောက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၂။ ဒီ Android 9.0 octa core2din...
၁၂.၈ လက်မ Tesla Universal Car Radio Voice Control
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / Set 27.5 * 25.5 * 20CM / လက်ဆောင်သေတ္တာ 4Sets / CTN 14.8KGS / CTN 54 * 30 * 45CM / CTN
Klyde 12.8 "Tesla စတိုင်လ် Android 9.0 IPS Screen2Din Universal ကားရေဒီယိုအသံထိန်းချုပ်မှု ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကားအမှတ်တံဆိပ်ကိုချန် ထား၍ သင်မှာယူသောအခါတစ်နှစ်လုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှိပါကသင့်ကားနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပါဝါကေဘယ်ကြိုးကိုထောက်ပံ့ပေးပါမည်။ ၎င်းသည်2Din Universal Car Radio နှင့်သင့်လျော်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍...
Passat B5 အတွက် Volkswagen android ကား DVD ကစားစက်
Passat B5 အတွက် Android ကား DVD player သဟဇာတ အောက်ပါမော်တော်ယာဉ်များအတွက် 100% fit: Passat B5 / ဂေါက်သီး4/ ပိုလို / Bora / Jetta / Sharan / T5
Tiguan / Touran အတွက် PX5 android ကား DVD ရေဒီယို
PX5 android ကား DVD ရေဒီယို Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆
VW universal အတွက် Android 9.0 car dvd player
VW universal အတွက် Android 9.0 car dvd player Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆
VW universal အတွက် Android9ကားရေဒီယို
VW universal အတွက် Android9ကားရေဒီယို Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆ ၂၀၀၆-၂၀၁၂
Jetta 2013 အတွက် Android car dvd gps player
Jetta 2013 အတွက် Android car dvd gps player အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
Golf CC အတွက် Android system dvd radio
Golf CC အတွက် Android system dvd radio Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆
VW Santana 2013+ အတွက် Android ကား DVD player
VW Santana 2013+ အတွက် Android ကား DVD player အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
VW MULTIVAN 2008-2012 အတွက် Android ကား DVD player
VW MULTIVAN 2008-2012 အတွက် Android ကား DVD player အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB
12.8 လက်မတစ်လောကလုံး PX6 စကားသံကို contorl ကားမာလ်တီမီဒီယာ
Cerato / Fort 2018 ဘို့ကားတစ်စီးကိုဗီဒီယို
MOKKA 2017 ဘို့အညွှန်းနှင့်အတူကားတစ်စီးရေဒီယို
Impreza XV ဘို့မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ
Maxima 2015-2016 များအတွက် Oreo ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား
octa Core 32G ဌာနမှူးယူနစ် VW တို့တစ်လောကလုံး
Atenza 2017 ကားတစ်စီးစတီရီယို DVD player
CX-5 ATENZA ဘို့ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာသည့်စနစ်ဟာ android
PG301 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ
တစ်ခုတည်း din 7inch တစ်လောကလုံးကားတစ်စီးအညွှန်း
Universal Car Dvd Player Universal Car DVD Player Universal Car Dvd GPS universal car DVD player Android Universal Car Gps Player 2din Universal Car Audio Video Player Xpander Car DVD Player Ml300 Car Dvd Gps Player